Torohevitra momba ny fitsitsiana vola hivezivezy
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » Torohevitra momba ny fitsitsiana vola hivezivezy
Hostpost • Vaovao • Dinika fizahan-tany • Tsiambaratelo momba ny dia • Vaovao isan-karazany
Betsaka ny olona te-hahita araka izay tratra izao tontolo izao alohan'ny hahatongavan'izy ireo ho antitra loatra ka tsy afaka mandeha.
Manomboka amin'ny fampisehoana ny tenanao amin'ireo kolontsaina sy ny manodidina vaovao ka hatramin'ny fahitana ireo tsangambato mahafinaritra, dia misy tombony be dia be ny dia. Ka maninona no tsy tianao?
Eny, tsy izany no zavatra mora indrindra indrindra eto an-tany. Eo anelanelan'ny sidina, toeram-ponenanao ary ny fandanianao ankapobeny dia tsy zavatra azonao atao amin'ny karama herinandro izany.
Fa amin'ny fahazarana tsara, fanoloran-tena ary fisainana hendry dia tena mora be ny manangona vola handehanana any ivelany.
Jereo ny volavolan-dalànao
Ny faktioran'ny faktiora anao dia afaka mamoaka sakana lehibe avy ao anaty kitapom-bolanao. Soa ihany fa misy fomba ahafahanao manapaka azy ireo kely. Afaka manomboka ny tenanao ianao amin'ny fampiharana ny fahazarana fotsiny amin'ny fomba fiainanao. Ireto dia zavatra tsotra toy ny fanokafana ny varavarankely mifanohitra amin'ny fampiasana ny aircon, ny fisian'ny orana haingana kokoa, na ny famonoana ny jiro raha tsy tena ilainao izany. Mety tsy dia toa mpanangom-bola be ireny, fa rehefa mandeha ny fotoana dia hahita fahasamihafana amin'ny faktioranao ianao.
Azonao atao koa ny mampiditra ireo fahazarana ireo amin'ny orinasanao. Ho an'ny fihenam-bidy bebe kokoa, azonao atao ny mitsidika Utility Bidder. Eto ianao dia afaka mahazo teny nindramina amin'ny faktioranao mba tena hahazoany vola betsaka indrindra amin'ny volanao.
Mijanona ho fanoloran-tena sy fikirizana
Roma dia tsy natsangana tao anatin'ny iray andro, midika izany fa tsy ho afaka hitahiry hahita azy io ao anatin'ny iray andro ianao. Mila manam-paharetana ianao hitahiry vola be. Zavatra isan'andro, isan-kerinandro. Ny fitsitsiana dia tsy zavatra tadidinao indray mandeha isam-bolana fotsiny ary antenainao ny hahatongavana amin'izany. Makà fanapahan-kevitra tsara amin'ny fandanianao vola. Ity dia mety hampihena ny kalitaon'ny taratasy fidianao mandritra ny volana vitsivitsy na fivarotana zavatra tsy ilaina izay manangona vovoka ao an-trano fotsiny. Raha afaka mifikitra aminy mandritra ny fotoana lava misy dikany ianao, dia ho eny amin'io fiaramanidina io ianao manana ny fotoan'ny fiainanao.
Jereo izay nohaninao
Lafo ny sakafo, indrindra rehefa tsy vitanao ny tenany. Rehefa ratsy ny andro any am-piasana dia toa sakafo mety tsara ny sakafo mafana be sa tsy izany? Lafo koa izy io raha ampitahaina amin'ny sandwich ham azonao atao any an-trano. Azonao atao mihitsy aza ny mamorona manokana amin'ny sakafo atoandro ao an-trano. Hanakana anao tsy hahazo an'io sakafo mafana novidinao isan'andro tamin'ny sakafo atoandro io izany. Eritrereto toy izao raha mandany £ 10 isan'andro amin'ny sakafo antoandro miasa dimy andro isan-kerinandro ianao dia hitahiry £ 200 isam-bolana.
Ny kafe dia iray hafa izay tsapantsika fa ilaina amin'ny fiainantsika isan'andro. Manome antsika ny daka, ary koa ny fananana lafiny ara-tsosialy amin'izany. Fa mila tena mandany izany amin'ny kafe ve ianao? Ny kafe be fitiavana avy any Starbucks dia mety halaim-panahy, saingy tena tsara lavitra noho ny kafe £ 2 azonao ve izany? Ka raha tsy afaka manapaka azy tanteraka ianao dia farafaharatsiny mba hampihenana ny fandanianao kafe.